မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: January 2009
တစ်ခါတစ်ခါမှာ တစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့တစ်နေရာတည်းမှာ နာနေတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျ ပါးပြင်မှာတစ်သွင်သွင်စီးတဲ့ဒီနှလုံးသွေး အဖြူရောင်က မြစ်တစ်စင်းအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်နေ့မှာ ၂၄နာရီစာဖြန့်ခင်းထားတဲ့အလွမ်းတွေကတံတားတစ်စင်းအနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းဖန်တီးနိုင်ရင် ငါလေ မင်းဆီ အရောက်တောင်လှမ်းလာနိုင်တယ်တစ်ပတ်လုံးမတွေ့ရတဲ့ ရက်တွေဆက်လာတော့ငါ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံး စမ်းသပ်လို့မရတဲ့ဝေဒနာဆိုးတွေ ထိုးနှက်ငါလေ အသက်မထွက်ရုံတမယ် မင်းကို လွမ်းပါတယ်ပို့ခဲ့မိတဲ့ ဖုန်းမတ်ဆေ့ခ်ျတွေနဲ့ မေးလ်တွေသာ ကျောက်စာတွေလို တည်ရှိမယ်ဆိုရင်မင်းကိုချစ်တဲ့ ငါ့သမိုင်းက(နောက်ဘုရားတစ်ဆူပွင့်တဲ့အချိန်မှာတောင်)ကျမ်းစာတွေနဲ့အပြိုင် စာဖွဲ့နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ငါ့ချစ်ခြင်း၊ ငါ့အလွမ်းတွေနဲ့အတူ ရေးဖွဲ့ခဲ့မိတဲ့ ကဗျာတွေလဲမင်းရင်ကို လောင်ကျွမ်းမကျွမ်းမသေချာပေမဲ့ ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ ငါ့နှလုံးသွေးရဲ့ ကာရံတွေကြောင့်ရေးစပ်ရင်းနဲ့ ငါ့အမြင်အာရုံတွေတောင် အပူငွေ့တွေဖုံးလို့ အရာအားလုံးမှုံဝါး မင်းမျက်နှာမှတပါးငါ့အနာဂတ်ကိုတောင် မြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တာအလွမ်းဆိုတဲ့ ဒီဝေဒနာဆိုးကြောင့်လေလား... ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်ခွင့်ရရင်ဒီဝေဒနာဆိုးက အမြန်လွတ်မြောက်နေ့တိုင်းတွေ့ခွင့်ရတဲ့ အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးရောက်ပါရစေလေ.. Gepostet von
အမည်ခံသာလွတ်လပ်သော အမိနိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့အမှတ်တယ
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လွတ်လပ်တဲ့အတွေးအခေါ် အသိအမြင်လေး လက်တစ်ဆစ်စာနဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ပြိုင်ဖြစ်ရင်း ဆုတွေတက်ယူခဲ့ဖူးတာကိုတော့ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးတစ်ရွာလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် သမုတ်လို့ရတဲ့ ယနေ့မျက်မှောက်အချိန်အခါမတော့... စိတ်ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်လို့ အတွေးငှက်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းခွင့်ပြုရင်း ဟိုရွာ ဒီရွာတို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားမှု ဦးဆောင်မှု တိုးတက်မှုတွေကို အမှတ်မထင် သိရှိလိုက်ချိန်မတော့...မပြောတော့ဘူး မောတယ်လေကဲ..သူငယ်ချင်းတို့ရော !!!သူများတကာ နိုင်ငံတွေရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေနဲ့ တို့ မြန်မာဆီက အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဘာတွေ ကွာခြားနေလဲ သိလား? တန်ဖိုးထားမှု ဦးဆောင်မှု တိုးတက်မှုတွေကို သတိထားမိမယ်ဆိုရင်တော့လဲလေ.......နိုင်ငံအတွက် မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကကူညီပေးကြမယ့်သူစာရင်း ၀င်လောက်တဲ့အထိ မဟုတ်ပေသိ အမည်ခံသာလွတ်လပ်သော အမိနိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့အမှတ်တယအနေနဲ့ ဒီပိုစတာလေးကိုတော့ ဘလော့မှာ တင်ထားလိုက်ပါရစေ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ချင်တိုင်း တင်ခွင့်မရှိမှန်းသိပေသိပေါ့နော်...မမြင်ရရင် ဒီမှာ နှိပ်ဗျာ